प्रदीप बस्नेत काठमाडौं, ४ भदाै
डा. भेषबहादुर थापा नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रका एक हस्ति हुन् । परराष्ट्रमन्त्री समेत भइसकेका थापा कुटनीतिक वृत्तमा प्रखर वक्ताको रूपमा पनि चिनिन्छन् । नेपालको कुटनीतिमा सबैभन्दा जटिल नेपाल भारत सम्बन्ध मानिन्छ । थापाले नेपालका लागि भारतमा राजदूत भएर नेपाल भारत सम्बन्धको सुक्ष्म विश्लेषण पनि गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकाे पहलमा नेपाल भारतबीचको विवाद समाधानका लागि बनाइएको प्रवुद्ध वर्गहरुको समूहमा पनि थापा नेपाल तर्फका संयोजक थिए । अहिले भारतीय विदेशमन्त्री नेपालमा छन् । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएका हुन् । भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको छिमेकी देशहरुसँगकाे सम्बन्धका विषमा शिलापत्रकर्मी प्रदीप बस्नेतले भेषबहादुर थापासँग कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ थापासँग गरिएको कुराकानी ।
अहिले दुवै देशमा स्थीर सरकार छन् । भारतीय नरेन्द्र मोदीले छिमेकी पहिले भन्ने नारा अघि बढाए पनि पहिलो कार्यकालमा नेपालसँगको सम्बन्धमा खासै नयाँ आयाम सुरु हुन सकेन । अहिले यि दुई देशबीचको सम्बन्ध कुन स्तरमा छ ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाललाई महत्व दिएको देखियो । साथै छिमेकीको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन चाहेको बताउनुभएको थियो । तत्कालीन संविधानसभा बैठक आएर उहाँले त सम्बोधन नै गर्नुभएको हो ।
नेपालमा पनि ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो । अपेक्षाभन्दा बढी बहुमतका साथ अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । त्यो बेलामा भएको संवाद र समझादारीको अपेक्षा ज्यादै ठूलो थियो । सम्भवत नेपालभार सम्बन्धमा विगतमा देखिएका उतारचढावमा बढी सुमुधुर होला भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालप्रति देखाउनुभएको सद्भाव र समझदारीले नयाँ आशाको प्रक्रिया सुरु भएको थियो तर त्यसको केहीसमयपछि ठ्याक्कै उल्टो नाकावन्दीले र संवाद अवरुद्ध गर्यो । यसकाबीचमा दुईदेशबीचको सम्बन्धको आधार पुुरानो मात्र होइन विशिष्ठ किसिमको हो ।
जनस्तरको सम्बन्ध, खुलापन र खुला संवाद समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बचाइराखेको छ । सरकारीस्तरमा बीचबीचमा समस्या देखिए पनि जनताजनताबीचको सम्बन्धमा कुनै रुकावट आएन । त्यहीबेलामा दुईप्रधानमन्त्रीले सम्बन्धमा एकतह माथि उठाउनका लागि र विगतमा रहेका सन्धीसम्झौताका कमजोरीलाई सच्याउनका लागि प्रवुद्ध समूह गठन गरिएको हो ।
दुई वर्षको अधिकार पाएको उक्त समूहले प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको छ । पहिलो कार्यकालको सुरुवातमै सबैलाई दिल्लीमा बोलाएर प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ सन्देश दिन पनि खोज्नुभएको थियो । छिमेकीको भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएर सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो तर नाकावन्दीले नेपाललाई नकारात्मक बनायो । सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि राजनीतिक, प्राविधिक तथा कुटनीतिक तहमा संवाद भने जारी रह्यो ।
आजैदेखि नेपाल भारत संयुक्त अयोगको बैठक शुरु हुँदैछ । दुवै देशमा विदेशमन्त्री बैठकमा सहभागि हुँदैछन् । यो बैठकको सुरुवात पहिलेदेखिकै निरन्तरता हो । विदेशमन्त्रीले सभापतित्व गरेर सम्बन्धलाई सुधारको बाटोमा लैजाने र देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्ने गरीको छलफल हुनु महत्वपूर्ण कदम हो ।
भारत नेपालको माथिल्लो तहमा छलफल हुँदा आशा अपेक्षासहित सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्ता छलफल हुनु सकारात्मक हो । तर भ्रमण भएको बेला सद्भाव देखाउनका लागि भए गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले सँधै गुनासो गर्ने ठाउँ भने रही रह्यो । अहिले भारतीय विदेशमन्त्री अनुभवी र विज्ञ व्यक्ति पनि भएका कारण उहाँको नेतृत्वमा आउने टोलीसहितको आजदेखि सुरु हुने बैठक गति दिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यो एउटा अवसर पनि हो ।
छिमेकमा देखा परेका कुटनीतिक समस्याले सार्कदेखि सीमामा समेत समस्या परेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे यो बैठकले छलफल गर्ने छ । नयाँ कुुरा भन्दा पनि पुरानै कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गरे राम्रो होला । साथै प्रवुद्ध समूहको संयोजकको नाताले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनमा लैजान यो बैठकले भूमिका खेलोस भन्ने अपेक्षा मेरो छ ।
दुई वर्ष लगाएर तपाईजस्तो विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले किन आनाकानी गरेको होला ?
मुख्य कुुरा त त्यो दुई टोली नभएर एउटै टोली थियो । र विवादरहित तरिकालै प्रतिवेदन तयार भएको हो । समझदारीको नयाँ गोरेटो तय गर्नको लागि दुवै पक्षले एउटै धारणा राखेर निश्कर्षमा पुगेको हो । त्यो नै महत्वपूर्ण पक्ष थियो । नेपालभारतबीचका समस्यालाई यो तपाईको यो हाम्रो मात्रै भनेर हेरेनौ ।
दुबैतर्फका समस्यालाई समानस्तरमा स्वामित्व ग्रहण गरेर सुझाव दिएका छौं । समस्या छ यसको समाधान गर्नैपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीयस्तरी समझदारीबाटै प्रवुद्ध समूह जन्मिएको हो । संयुक्तरुपमा एउटै प्रतिवेदन निश्कनु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो । सुरुमा भारतको निर्वाचनका कारणले बुझ्न ढिलाई भएको भनेर अनौपचारिकरुपमा आयो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय व्यवस्थापन हुने र प्रतिवेदन बुझाउने समयको प्रतिक्षामा छौं ।
अनौपचारिक रुपमा तपाईंहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केही त्यस्ता विषयहरु छन् जसलाई भारतीय व्यूरोक्रेसी र सुरक्षा निकायले नबुझ्न दबाब दिएका कारण प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिएको भन्ने छ नि ?
भारतमा कसले कसलाई के दबाब दियो, कसले के भन्यो भन्नेतिर कम्तीमा म संयोजक भएर तयार पारेको प्रतिवेदनका बारेमा बोल्ने कुरा भएन । यो उहाँहरुको आन्तरिक कुरा हो । हामीलाई औपचारिकरुपमा त्यस्तो भनिएको पनि छैन । जुन तहबाट समूह निर्माण गर्ने र यसका आधारमा समस्या समाधान गर्ने भनेर हामीलाई जिम्मेवारी दिइयो त्यो भन्दा माथि राज्य सञ्चालनको कोही छैन । उहाँहरुकै अपेक्षा अनुसार प्रतिवेदन तयार भएको छ । ७० वर्ष देखि थाँती रहेका समस्या समाधान गर्न दुवैपक्षलाई सहज हुने गरी यो प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
त्यसैले भारत या नेपाल कसैले पनि बहाना बनाउने स्थिती छैन । सम्पूर्ण कुरा विवादरहित हुन्थ्यो भने प्रवुद्ध समूह पनि आवश्यक थिएन । ढिलो भए पनि यि समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म सम्बन्धले गति लिन सक्दैन । हेर्दा ठीकठाक नै छ आउजाउ चलेकै छ । बन्द व्यापार जारी छ । दैनिक प्रक्रियाहरु चलिरहेका छन् । तर यो भन्दा अगाडि बढ्नका लागि समझदारीका आधारमा चाल्नुपर्ने कदम यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसको कार्यान्वयन अनिवार्य छ ।
सुगौली सन्धी हुँदै १९५० को सन्धीदेखि नेपाल भारतको सम्बन्धमा नेपाल पक्षले भारतसँग हेपिएको महसुस गर्दै आएको छ । यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने ?
यस बारेमा नेपालमा निरन्तर गुनासो चलिरहेको छ । यही कुराको पहिचान भएर नै दुईवटा प्रधानमन्त्रीले प्रवुद्ध समूहलाई जिम्मा लगाएका हो । सरकारी स्तरमा हुन सकेन । राजनीतिक तहबाट पनि समाधान हुन सकेन । त्यसैले गैरराजनीतिक समूहलाई जिम्मा दिँदा वस्तुगत भएर प्रतिवेदन आउँछ कि भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो । समस्या छ त्यसको समाधानको लागि भनेर नै प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको हो । यसले कहिले गएर गति लेला र प्रगतिको बाटो लेला भन्ने आशा छ ।
बाहिर आएको कुरामा सीमा व्यवस्थापनका लागि स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट र १९५० को नेपाल भारतबीचको असमान सन्धी विस्थापन र नयाँ सन्धीको सम्झौतामा भारतीय संस्थापन पक्षले असन्तुष्टी जनाएको भन्ने छ त्यस्तो हो ?
म कुनै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न । यो प्रतिवेदनको स्वामित्व दुई प्रधानमन्त्रीको हो । उहाँहरुलाई जिम्मा लगाएपछि सरकारले कुन बाटो लिन्छ र कस्तो अवधारणा बनाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । दुवैपक्षले सहमतिका साथ तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दासम्म यसका विषयमा प्रवेश गर्नु ठीक हुँदैन ।
नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि बनेको स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा नेपालले बाँकी विश्वमा छुट्टै पहिचान बनाउनुपर्ने छ । तर हामी भने छिमेकीसँगै सम्बन्धमा अल्झिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी पो छ कि ?
केही नभएको होइन । धेरै कुरामा सुधार भएको छ । संवाद निरन्तर छ । म आफै पनि ६ वर्ष भारतको लागि राजदूत भएर बस्दा पनि व्यापार, १९५० को सन्धी जलस्रोत आदिका बारेमा थुप्रै चरणमा छलफल भएका हुन् । तर जुन एउटा साइकोलोजिक डाइमेन्सन छ । हामी कमजोर भएको बेलामा भारतीय पक्षको व्यवहार सन्तुलित हुँदैन ।
भारत नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट सम्म चासो राख्छ भन्ने आम धारणा छ । यसको हल नगरीकन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कठिनाई भएकै हो । भारत नेपालको विकासमा बाधक भएको भन्ने आम बुझाई गलत होइन । यसमा बिस्तारै सुधार त भएको छ तर भएका गुनासा चाहे ती ठूला हुन या साना हुन ति समाधान गर्नैपर्छ । त्यसपछि मात्रै आपसी सद्भाव र विश्वासको वातावरण बन्छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा सीमा, राजनीतिक सम्बन्ध आदिमा समस्या देखिदै आएको छ । चाहे त्यो नेपाल भारत होस् चाहे त्यो भारत पाकिस्तान नै किन नहोस् । अहिले सार्क क्रियाशील छैन । भारत सार्क भन्दा पनि बिमस्टेकको पक्षमा देखिन्छ । यो बेला क्षेत्रीय सहयोग संगठनको आवश्यकता छ कि छैन ?
क्षेत्रीय अवधारणा सुरुमा युरोपबाट आएको हो । युरोपियन युुनियनमा कोल्ड कम्युनिटीदेखि करेन्सी युनिफिकेसन देखि बोर्डरसम्म पुग्यो । एउटा देशको भीसा लियो भने सबै देशमा जान पाइने बनाए । उनीहरु बौद्धिक हिसाबबाट अगाडि बढाउँदै लगे ।
युरोप एज अ सोलिड युनिटका रुपमा स्थापित भयो । बोर्डरलेस युरोप बनाए । साना साना मुलुकबाट युरोपियन युनियन मार्फत विश्वभर प्रभाव दिन थाले । त्यसको सिको गर्दै आसियान बन्यो । ल्याटिन अमेरिकाले पनि यो अनसुरको अभ्यास गर्यो । तर हामी भने पछि पर्दै गयौं । कहिले स्वतन्त्रताको त कहिले बोर्डरको विषयमा हामी अल्झियौं ।
क्षेत्रीय अवधारणालाई अंगाल्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि आन्तरिक, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय असमझदारीले गर्दा सार्कले गति लिन सकेन । अरुले क्षेत्रीय अवधारणा राखेर गरेको प्रगति देखेर हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर नेपालले पहल गरेको हो । सार्क चीर निद्रामा छ अहिले । सार्क वा बिमस्टेक होइन । यि दुवै समानान्तर हुन् । पहिलो बिमस्टेकको बैठकमा नेपालको तर्फबाट पराराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा फुकेटमा मै गएको हुँ । सार्क र बिमस्टेक एकअर्काका विकल्प होइनन् ।
छिमेकी पहिले भन्ने नरेन्द्र मोदी विजेपीको ठूलो मतका साथ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नेपालमा पनि दोस्रो पटक अत्याधिक मतका साथ केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । पाकिस्तानका इमरान खान जस्ता नेता आएका छन् । यस्तोबेला पनि सार्कले अझ गति लिनुपर्ने होइन र ?
यसमा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई देखाएर समाधान हुने होइन । तर सामूहिक सोचाईले अग्रता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अरुको देखासिकीबाट जान्नुपर्ने विषय चाहिँ हो । हामीहरु धेरै पछि परेका छौं । संसारको सबैभन्दा गरिव व्यक्तिरुहको समूह यही क्षेत्रमा छ । पारस्परिक सहयोगको आधारबाट सबै अगाडि बढ्न सक्छौ । कुनै एउटामात्र अगाडि बढ्दा अरु पछि समस्या रहिरहन्छ भन्ने व्यापक र वृह्गंम सोचाई आवश्यक छ ।
तुलनात्मकरुपमा सार्कको गतिका लागि भारतको भूमिका अलि बढी आवश्यक होइन ? तर उसकै छिमेकीसँग सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन । भारत पाकिस्तानकै कारण सार्क रोकिएको छ ।
स्वभाविकरुपमा ठूलो देश भएको नाताले यो जिम्मेवारी हुन्छ । ठूलो आर्थिक क्षेत्र पनि हो भारत । तर एउटै देशलाई मात्र दोष दिने कुरा पनि ठीक होइन । सामूहिक वातावरणको पक्षमा जसले पनि भूमिका खेल्न सक्छ । सार्क समिट भएको बेलामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी नेपाल आउनुभएको थियो । बाजपेयी र परवेज मुसरफको भेट नहोस् भन्ने भारतको सन्देश थियो ।
त्यही अनुसारको दुई नेताको आउजाउको प्रबन्ध पनि मिलाइएको थियो । तर मुसरफ आउनेबित्तिकै बाजपेयीलाई सलाम गर्नुभयो र हात मिलाउनुभयो । अपेक्षा गरिएको थिएन, प्रबन्ध पनि मिलाइएको थिएन । दुई नेताको भेट नहोस् भन्नेमा हामी सचेत पनि थियौं । कहिलेकाहीँ संवादको थालनी यसरी पनि हुन्छ । भारतले पाकिस्तानलाई नेपाल आउन हवाइ अनुमति नदिएका कारण मुसरफ चीनको आकाश हुँदै आउनुभएको थियो ।
आजदेखि सुरु हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा केके विषयमा छलफल हुनसक्छ ?
यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसको टम्र्स अफ रिफरेन्स (टिओआर) अलि न्यारो छ । दुई देशका बीचमा रहेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र विकास योजनाका बारेमा छलफल होस् । जनतामा अपेक्षा धेरै छन् तर कार्यान्वयनको तहमा शिथिलता देखिएको छ । अब त्यस्तो नहोस् । यसले आंशका मात्र जन्माउछ । विदेशमन्त्रीतहको बैठकमा कुनै एउटा मात्रै नभएर विदेशमा देखिएका समस्याका बारेमा पनि छलफल हुन्छ ।
हामीकहाँको समस्या कायान्वयन भन्दा अविश्वासको हो कि ? भारतको उपस्थिती र प्रभाव माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म हुन्छ । यसैले यता आउँदा र उता जाँदा त्यसको प्रभावबारे आमतहमा आँकलन सुरु हुन्छ । जसले गर्दा नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेको छ ।
हामी पनि अलि सशंकित भएका हौं कि ? समस्या हामीमा पनि छ । सम्बन्धका आधारमा समानताको आधारमा लैजाने प्रयत्न भइरहेका पनि छन् । ठूलो देशले सानो देशलाई अर्कै दृष्टिले हेर्छ भन्ने साइकोलोजी हामीमा पनि छ । भारतमा पनि नेपाललाई हेर्ने, बुझ्ने विषयमा प्रशासनिक, सुरक्षानिकाय र राजनीतिक तहमा फरक फरक धारणा पाइन्छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेका छ ।
छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा अर्को छिमेकी चीन पनि नेपाल सम्बन्धमा जबरजस्त उपस्थित भएर आएको देखिन्छ । स्वभाविकरुपले हाम्रा सामाजिक,राजनीकि, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धले चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा नेपाल ६०र४० को आधारमा रहन्छ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गरेको प्रंसग ठीकै हो ?
छिमेकीको सम्बन्धलाई अंकको प्रतिशतमा नहेरौं । दुइवटै छिमेकी हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वका हुन् । दुई उदयीमान शक्तिकेन्द्र बन्नलाई प्रतिपस्पर्धा पनि छ, सहकार्य पनि छ । चीन र भारतको व्यापारको तथ्यांक हेर्दा धेरै माथि देखिन्छ ।
एउटालाई अर्कोको विकल्पको रुपमा हेर्नु नेपालको लागि आत्मघाती हुने छ । कुनैपनि छिमेकीपरस्त हुनु नेपालीको हितमा हुँदैन । चीनले विआरआई मार्फत विश्वलाई अगाल्न गरिरहेको प्रयासलाई सकारात्मकरुपमा हेर्नुपर्छ । साथसाथै विश्वव्यापीरुपमा नेपालले क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई अझ बढाउनुपर्छ ।
नाकाबन्दीपछि चीनसँगको सम्बन्ध अलि नजिकएको हो कि ? भारतले पनि नेपाल चीनको नजिक गएको र चिनिया गतिविधी बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ नि ?
यो चाहिँ संकुचित धारणाको विस्तार हो । नेपालमा मात्रै होइन ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका लगायतका देशमा समेत चीनले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । हामी असंलग्न परराष्ट्रनीति भन्दा बाहिर गएका छैनौ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ४, २०७६, ११:४२:००
सात महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाइनँ